mhando 0.8.0 – Kurwisa APIs
Mbudzi 29, 2011 kubudikidza chipo 65 Comments
Kana APIs vanorwa
Zvakanaka mberi wava wakabvunzwa Google Translate API kurega kushanda, takanga pakupedzisira akakwanisa kuronga kusunungurwa itsva iyi. Uyu akatevera yakareba ezvinetso yapuwa mukuru shanduro, zvikurukuru nemhaka yokuti Google akasarudza vavatore yemararamiro kushandiswa pamberi wava kwavo akakonzera yapfuura shanduro kutsigira zvikumbiro kuna Kuwedzera kune pakakwirira itsva. The Google uchinjewo kwakamutsa API muganhu muna Bing rokushandura API, sezvo vanoshandisa vakanga nokuchinja injini, iyo migweje ari Transposh nesimba coded API inokosha Bing.
Panguva ino taive yakasimba shanduro, izvo zvaiita sokunge chinhu chakanaka kusunungura, asi kwete, taifanira kuva zvimwe zviri mu, saka isu pakupedzisira akasarudza vazoita nyaya vakawanda Widgets rutsigiro (uye zita sarudzo zvakare, yippee!). Sokuti zvikuru chairuramira mberi? asi kwete, ichi akaita chinhu chikuru nyorazve kwedu Widget kwezvivako uyewo. Chaizvoizvo kuvandudzika nayo zvikuru zvinoshamisa pamwe kuchinja nzira CSS Wakawedzerwa, uye nzira chete Widgets nezvokudzokera servers kuchinja mumutauro (zvino isu tirege asingabatsiri POST runhare kune Server). Kunyange achinyora kuti taiva rombo zvakakwana kugumburwa pamusoro PHP5.3 kuti PHP5.2 kusapindirana nyaya ine seti nezvimwe zvinetso akabata kusunungurwa kwedu shure imwe vhiki. Tinoda kutenda vanoshandisa zhinji kuti nekuvaka zvedu Beta zvabudiswa uye isu kwakabatsira kuwana ezvinetso zvakavigwa pasi akaturikidzana yeMutemo uye kunzwisisa.
We akatorawo mukana uyu kuti achinje mashoko edu zvishoma, kana uri kuratidza Google shambadzo kubva AdSense pamapeji ako rakashandurwa, Tichatora 1/1000 kuti nzvimbo kushandiswa ne adsense pachedu bumbiro redu, saka kana Transposh ari kubatsira iwe tanga kuva kwemari pakati $ 10K unenge kutenga isu kofi! saka ngaavongwe! Kujekesa zvinhu zvishoma, tisingadi kusika okuwedzera kuna nzvimbo papeji rako, uye isu hatingazvirumbidzi pinza chero shambadzo kana kushandura marongerwo yako, kana iwe hauna shambadzo, tinoita hapana. Kana uchifunga kuti izvi kubvunza zvakawanda, ungangopiwa zvinomuomera kuikanganwa plugin yedu, muridzo zvinyoronyoro vorega, uye uende. Kana uchida zvokutenga rezinesi, tisingadi kuvatengesera asi, asi vanenge mari yakawanda.
Other kuchinja kuti shanduro iyi anosanganisira:
Added Catalan uye Hindi rutsigiro Bing – anotaura pacharo.
Dropdown Widget nani CSS – chaizvoizvo anotarisa nani zvikuru zvino.
Support nokuti Memcached – kana APC nevamwe opcode akavanzwa saizvozvo vakanga kukurebera, zvino unogona kushandisa memcached uye zvakawanda zvinonakidza.
nane 404 peji kukurukurwa (havaumbi Links itsva mapeji vasiri huripo) – kureva Google Crawler kuchaita dzichikunetsa nzvimbo yako zvishoma.
Isa caching pamusoro rackspace cloudsites – vakanga X-cache yakaiswa kuti opcode cache, asi pasina mushandisi ndangariro, zvakakonzera iri kuwedzera logfiles – zvino wakaiswa.
Vakawanda kuduku unocherekedza – Tinogona kuverenga avo, asi hatina minwe zvakakwana.
Turkish Translation kubudikidza Semih Yeşilyurt.
Tinovimba zvauchasangana kunakirwa shanduro iyi, uye sezvo nguva dzose, tichimirira zvaunotaura, pfungwa, mazano uye marimi.
P.S – Kuedzwa musi WordPress 3.3 beta4, anoshanda zvikuru.
Ina Under: Release zviziviso, Software Updates Tagged With: ajax, Bing (MSN) muturikiri, bugfix, shandurudzo google, rusununguko, Widget, xcache
An kukanganisa kwakaitika, izvo pamwe zvinoreva dzinoudya ari pasi. Edzai zvakare kwapera.